Loop & Tie: Hadiyadaha Fidinta B2B Hadda Waa Aaladda Iibinta ee Suuqa Suuqa Beddelka | Martech Zone
Cashar aan sii wado inaan barto dadka suuqgeynta B2B ayaa ah in iibsigu wali yahay shakhsiyeed, xitaa markaad la shaqeyneyso ururo waaweyn. Go'aan-qaatayaashu waxay ka walaacsan yihiin shaqooyinkooda, heerarkooda culeyska fekerka, muggooda shaqadooda, iyo xitaa raaxaysigooda maalinlaha ah ee shaqadooda. Adeeg ahaan B2B ama adeeg bixiye, waayo-aragnimada la shaqeynta hay'addaada ayaa inta badan ka miisaan badnaan doonta wax-soo-saarka dhabta ah.
Markii aan bilaabay ganacsigeyga, aad baan ula yaabay arintan. Kaliya waxaan diirada saaray feejignaanteyda alaabada aan bixin karo ganacsi aan ku hormariyo. Inta badan waan ka naxay iyada oo macaamiisha ay ku wada xiriireen inaan si xawli ah ku soconno ama aan sameyneyno isbeddello badan. Waqti ka dib, waxaan bilaabay inaan fiiriyo sida aan ugu qiimeyn karo ururkooda meel ka baxsan soo gudbinta hadaladayada shaqada. Mid ka mid ah aaggu wuxuu ahaa hadiyado remind kaliya xusuusin feker leh oo ku saabsan qadarinta si loo fududeeyo maalintooda.
Qaarkood shaqsiyan baa loo shaqsiyeeyay, qaar kalena waxay la xiriiraan ganacsi. Markii mid ka mid ah macaamiishaydu u soo guureen xarun cusub oo qurux badan, waxaan u soo iibiyay iyaga oo ka ganacsada hal kafee oo kafee ah. Markuu mid kale oo ka mid ah macaamiishaydu bilaabay Podcast, waxaan u soo iibsaday kamarad fiidiyoow toos ah. Mid kale, waxaan iibsaday tikidhada munaasabadda sadaqada halkaas oo uu kahadlayo tababaraha NFL ee maxalliga ah. Markii hal macmiil uu lahaa cunugoodii ugu horreeyay, waxaan ka iibsaday shay fiican liiska ay rabaan.
Hadiyaduhu waa hab fiican oo lagu beddelo waayo-aragnimada isticmaale, laakiin waa in si fiican loo qabtaa. Markii aan u shaqeynayay wargeys ka soo baxa gobolka, waxaan daawaday waaxda xayeysiinta oo tikidhada maxkamadaha u sii deysa xayeysiistayaasha waaweyn. Ma ahayn hadiyad, waxay u kortay inay noqoto rajo. Hadiyaduhu waa kuwo shaqsiyeed waxayna beddeli karaan xiriirka.
Sidoo kale waxaan u ahay qof daacad ah oo daacad u ah macaamiisha markay ii mahadceliyaan inay ugu dambeyntiina ku bixiyeen hadiyadda fursad ay i siiyeen.
Loop & Xiro
Loop & Tie waa madal hawlgal ah oo ka caawisa ganacsiyada inay ku xirmaan macaamiisha iyagoo adeegsanaya farshaxanka hibada. Barxadda hadiyadeed ee xulashada ku saleysan waxay soo dirtaa farxad iyo dareen qadarin oo muhiim u ah xiriirka macaamiisha muddada dheer. Runtii waan wareystay aasaasihii Sara Rodell, on our Podcast.
Laga soo bilaabo 2011, Loop & Tie waxay badalaysay sida ganacsiyada uga fikiraan hadiyadaha. Carqaladeynta $ 125B warshadaha hibada shirkadaha, madal hadiyad ku saleysan doorashada waxay u oggolaanaysaa ganacsiyada inay beddelaan dhaqankii taariikheed ee u dirista isla caajis, hal-cabbir-dhan-hadiyad qof walba.
Taabadalkeed, dadka diraya waxay abuuraan uruurinta hadiyadaha alaabada leh in kabadan 500 ganacsiyada yaryar. Qaatayaasha ayaa markaa doorta sheyga ay ugu jecelyihiin ama doortaan inay ugu deeqaan qiimaheeda sadaqada, taasoo ka dhigaysa hadiyada is dhaafsiga ilo cusub oo xog iyo isgaarsiin ah.
Booqo Loop & Tie
Loop & Tie ayaa barnaamij cusub u soo saaray Salesforce. Iyadoo Loop & Tie macaamiishiisu tahay hadiyad, dadka isticmaala waxay u diri karaan hal ama 10,000 hadiyado daqiiqado gudahood. Hada waxaa laga soo dejisan karaa AppExchange, dadka isticmaala waxay si siman u rakibi karaan barnaamijka guud ahaan tusaalahooda Salesforce waxayna bilaabi karaan hadiyado u diraan rajooyinka iyo macaamiisha isla markaaba.
Loop & Tie, waxaan si isdaba joog ah uga fikirnaa siyaabo aan uga faa'iideysan karno awoodda tikniyoolajiyadda si ay uga caawiyaan dad badan inay isku xirmaan. Jiidida aan dareemeyno inaan isku aqoonsanno oo aan midba midka kale ugu dabaaldegno hadiyado waa dareen qurux badan, aan waqti lahayn. Adoo siinaya isticmaalayaasha Salesforce awood ay ugu diraan hadiyado codsigooda, waxaan si dhakhso leh ugu xoojin karnaa khibradaha hibada aadanaha.
Sara Rodell, Aasaasaha iyo Maamulaha shirkadda Loop & Tie
Loop & Tie isticmaalayaasha xiiseynaya inay ku xirxiraan CRM-da hadiyad ku saleysan kaqeybgalka waxay hadda ku tiirsanaan karaan Salesforce oo ah saldhiggooda gurigooda si ay ula socdaan xiriirka macaamiisha iyo wacyigelinta. Adoo kudaraya hadiyado ahaan aalad kaqeybqaadasho ah gudaha deegaanka Salesforce, Loop & Tie waxay ka caawineysaa dadka isticmaala inay sare uqaadaan macmiilkooda isdhaafsi la taaban karo, oo xusuus mudan.
Barxadda hadiyadda Loop & Tie waxay abuurtaa khibrad macmiil macno leh oo khariidado u ah baahiyaha ganacsiyada ee isu-miisaamidda iyo la socoshada. Dhisida gudaha Salesforce waxay ka caawisaa shirkadaha inay soo gudbiyaan taabasho feker leh oo aasaas u ah cilaaqaadka adag, dhammaantoodna ku dhex jira qaab la socon karo oo ka caawiya macaamiisha inay cabbiraan ROI ee barnaamijyadooda hadiyadeed.
Loop & Tie waxay siisaa khibrad macmiil shaqsiyeed oo dhista xiriirro waara oo kooxaha xogtuna u baahan yihiin inay fahmaan waxtarka ololaha, dhammaantoodna ku jira barxad bulsheed oo miyir qaba oo, hadiyad ahaan, u taageerta bulshada noocyo kala duwan, ganacsato yar yar oo ganacsi.
Ka eeg Loop & Ku xidhnow AppExchange
Tags: isweydaarsigahadiyado b2bgaarsiinta macmiilkaCRMgaarsiinta macaamiishabarnaamijka hadiyadahahiboistiraatiijiyad hiboloop & xerinloop oo xirowacyigeliniibinSara rodell